Sida wax looga beddelo aaladaha Apple ee aad ku kalsoon tahay | Wararka IPhone
Sida wax looga beddelo aaladaha Apple ee aad ku kalsoon tahay
Wararka IPad | | iCloud, Casharrada iyo buugaagta
Xaqiijinta laba-tallaabada ah ee Apple waa ikhtiyaar amni oo dhammaan isticmaaleyaashu ay ahayd inay karti yeeshaan. Adoo adeegsanaya nidaamkan waxaad hubineysaa in aalado cusub oo keliya lagu dari karo koontadaada, ama marin u hel iyo wax ka beddel xogta iyada oo la oggolaanayo marin ka helidda mid ka mid ah aaladaha aan u soo xulnay inay yihiin "aalado lagu kalsoon yahay". Laakiin qalabkayagu wuu isbadalaa, waxaan iibsanaa cusub, waxaan iibinaa mid duug ah… tanina waxay ka dhigan tahay in aalad la aaminay aysan sidaas noqon doonin. Waxaan hoosta ka sharaxeynaa sida aan wax uga badali karno liiskan qalabka si marwalba loo cusbooneysiiyo.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa helitaanka koontadayada Apple, tan waxaan ugu aadnay bogga https://appleid.apple.com oo guji "Maamul Aqoonsigaaga Apple". Waxaan galnaa xogta helitaanka iyo maaddaama aan heleyno xaqiijinta laba-tallaabo ah oo firfircoon, waa inaan galnaa nambarka noo soo diri doona mid ka mid ah aaladaha aan ku kalsoon nahay.
Marka aan ku jirno koontadayada, waa inaan Xullo dhanka bidix xulashada «Furaha sirta ah iyo amniga» oo markaa dhanka kale dooro ikhtiyaarka «Kudar ama ka saar qalabka aaminka».
Liiskaani waa meesha ay ka muuqanayaan dhammaan aaladaha ku xiran koontadaada iCloud. Waxaa laga yaabaa inaad aragto qalab aan adigu ahayn markaa sidaas darteed waa inuusan ku jirin liiska. Adoo gujinaya «Delete» si otomaatig ah ayay u baaba'aysaa mana noqonayso qalab awood u yeelan kara oggolaanshaha wixii isbeddel ah ee ku dhaca koontadaada. Waxaad heli kartaa aalado sugaya in la xaqiijiyo inaad ka mid noqotid aaladaha aad ku kalsoon tahay. Adoo gujinaya "Xaqiiji" lambar ayaa loo diri doonaa aaladdaas haddii aad gasho, horeyba loogu dari doono liiskaaga.
Waa muhiim inaad haysato hal (ama in kabadan) lambarka taleefanka oo ah qalab lagu kalsoon yahay. Waa habka kaliya ee aad had iyo jeer u dammaanad qaado hab aad ku gasho koontadaada kiis fog oo aad lumiso dhammaan qalabka aad haysato. Waxaad markasta codsan kartaa nuqul ka mid ah SIM-gaaga oo aad ku heleysaa farriinta halkaas si aad ugu hesho koontadaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » iCloud » Sida wax looga beddelo aaladaha Apple ee aad ku kalsoon tahay
Raac xilli ciyaareedka cusub ee NBA barnaamijka rasmiga ah
Soo dejiso waraaqaha darbiyada ee ogeysiisyada cusub ee Apple Watch